Tuesday September 18, 2018 - 13:48:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku beenisay sheegasho maalmo ka hor kasoo yeertay dowladda Xabashida Itoobiya oo aheyd in duqeyn ay ku dishay tobanaan dagaalyahanno mujaahidiin ah.
Mas'uul katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa sheegay in aysan jirin wax duqeymo ah oo ay lakulmeen ciidamadooda isagoo warka kasoo yeeray Itoobiya ku tilmaamay been aan sal iyo raad laheyn.
SomaliMeMo ayaa mas'uul katirsan Al Shabaab weydiisay waxa ka jira warka kasoo yeeray Dowladda Itoobiya ee ah in duqeyn xagga cirka ah ku dishay 70 askari oo katirsan mujaahidiinta?
"Warkaas Xabashidu sheegtay waxba kama jiraan sida muuqata dhaqankii Kenyaatiga ayay bilaabeen ee lagu yaqaanay in aysan wax aanan jirin ama dhacdo aananba dhicin iska sheegtaan, marka warkaas wax jira ma ahan, Meel ay diyaaradahoodu nagu beegsadeen iyo ciidan ay naga dileen midna ma jirto" ayuu yiri Mas'uul katirsan Al Shabaab.
Gen. Yilma Merdassa oo kamid ah saraakiisha ciidamada Itoobiya ayaa 15-kii September 2018 usheegay warbaahinta Afka dowladda ku hadasha ee Fanabc in duqeyn diyaaradeed ay ku dileen 70 katirsan dagaalyahannada Al Shabaab .
Sheegashada dowladda Itoobiya ayaa aheyd mid aad uliidata oo ay adagtahay sida loo rumeysto sababtoo ah ma sheegin halka duqeyntu ka dhacday iyo waqtiga ay dhacday arrintaas oo shaki badan geliyay wariyaasha balse warka kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa ah midka kadamba dambeysta ah ee xaqiijinaya in wax duqeyn ah aysan Itoobiya ka geysan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya islamarkaana aysan jirin 70 dagaalyahan oo laga dilay.